I-Seashell Cottage - I-Airbnb
Ellenabeich, Easdale, Seil Island, i-United Kingdom
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Annabel
U-Annabel Ungumbungazi ovelele
I-Seashell Cottage ingelinye lamakotishi amabili okuziphekela ezinkanyezi ezine atholakala endaweni yokongiwa kwemvelo eneminyaka engu-200 ubudala e-Ellenabeich nje ingxenye yehora eningizimu ye-Oban. Indawo ekahle yokuhlala nezinto eziningi ezinikezwa yile ndawo emnyango wakho. Ibha ye-Oyster / Indawo yokudlela engaphansi kwemizuzu uhamba ngezinyawo. I-Puffer Bar kanye neRestaurant/Igumbi Letiye e-Easdale Island uhambo olufushane nje lwemizuzu emibili ngesikebhe. Uhambo lwesikebhe sasolwandle luhamba lusuka ethekwini, ogwini lolwandle olunezitezi zendawo kanye nohambo lwamagquma konke kuhambeka ukusuka endlini encane. Idolobhana liyindawo ekahle yokujabulela ukushona kwelanga kusihlwa.
U-Ellenabeich ufinyelelwa ngokuwela 'Ibhuloho phezu kwe-Atlantic' elidumile ukuya e-Isle of Seil e-Argyll, eNtshonalanga Highlands yaseScotland. Lezi zakhiwo ezimbili ezibekwe kahle ezihlukaniswe kancane ziza zifakwe ilineni namathawula kanye nezindlu zangasese zikanokusho lapho uhlala khona futhi zihlanganisa ugesi kanye nebhakede elilodwa lamalahle omlilo. Uphethiloli owengeziwe uyatholakala.
I-Rockpool kanye ne-Seashell Cottages atholakala endaweni enhle yokudoba ogwini olusentshonalanga e-Argyll, eningizimu ye-Oban futhi anikeza ukufinyelela okulula ezindaweni eziphambili zezivakashi ngenkathi enikeza isisekelo esihle, esinokuthula seholide lakho. Idolobhana lezokongiwa kwemvelo lase-Ellenabeich, elinamakotishi alo acakiweyo lakhiwe ukuze kuhlaliswe izisebenzi ezinkwalini zendawo, kodwa imboni yawa ngo-1881 lapho ulwandle lungena emgodini omkhulu wenkwali - umgodi owawugcwele izikhukhula usabonakala.
Ngasenyakatho izindawo ezinhle zeLochaber kanye ne-Outdoor Capital yase-UK kufaka phakathi i-Glencoe zitholakala kalula. Eningizimu izindawo ezivelele zomlando zeKilmartin Glen kanye neCrinan Canal kuyilapho phakathi nezwe kukhona injabulo ye-Inveraray ngenqaba yayo ebabazekayo kanye neJele eliheha izivakashi kanye nezitolo ezithokozisayo zinikeza usuku oluhle lokuphuma. I-Oban iyisikhungo esiyinhloko kanye nechweba lesikebhe futhi liyisango eliya eziqhingini zase-Mull, i-Iona, i-Lismore ne-Kerrera ukusho ezimbalwa.
Indawo yasendaweni inikezela ngamathuba amaningi omsebenzi wangaphandle okuhlanganisa ukubona izilwane zasendle, uhambo lwesikebhe, ukutshuza emanzini, i-kayaking, ukugibela amahhashi kanye ne-scuba diving kwabanomdlandla!
Imisebenzi yokuphumula eyengeziwe yokuhlola amagugu acebile wendawo nayo ingajatshulelwa. Izinqaba, izingadi, amabhishi, izinkuni kanye nezinyawo ezimangalisayo kanye nokuqwala izintaba kutholakala kalula njengokudoba negolide. Ngakho-ke, inala yokujabulela futhi ngenkathi ungekho izinsuku zakho.
Two exclusive 4 Star Self-catering Cottages across ‘The Bridge Over the Atlantic’ at Easdale near Oban
Sihlala eduze ngakho sizohlangana nawe ngesikhathi sokuhlala kwakho.
UAnnabel Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Ellenabeich, Easdale, Seil Island namaphethelo